GADZIRISA KOMPUTA HAIZOENDA KUNORARA MAITIRO MUWINDOWS 10 - NYORO
Gadzirisa Computer Haizoendi Kunzira Yokurara MuWindows 10
Kurara maitiro ndechimwe chezvinhu zvakakosha izvo zvinopihwa neWindows Inoshanda System . Kana iwe ukaisa yako system mune yekurara modhi, izvi zvinoshandisa mashoma mashoma mashandisiro emagetsi, uyezve yako system inotanga kumusoro nekukurumidza. Izvi zvakare zvinokubatsira iwe kuti udzokere kwawakasiira ipapo ipapo.
Iyo nyaya neKurara mode chimiro che Windows 10:
Iyo komputa isiri kuenda kuhope mode ndeimwe yenyaya dzinozivikanwa dzinotarisana nevashandisi veWindows. Kutevera ndiyo mamiriro ezvinhu mukati Windows 10 apo yako system inogona kuramba kuenda kunorara modhi kana switch kana switch yehope mode kuvhura / kudzima zvisina kurongeka.
Sisitimu yako inomuka ipapo kana bhatani rekurara rakadzvanywa.
Sisitimu yako inomuka zvisina kurongeka kana iwe waiisa mune yekurara modhi uye kamwe kamwe inoenda kunorara.
Sisitimu yako haina kana chekuita nekudzvanya bhatani reKurara.
Unogona kusangana nemamiriro ezvinhu uye nenyaya nekuda kwekusagadziriswa kwesarudzo dzako dzesimba. Kune izvi, iwe unofanirwa kumisikidza yako emagetsi sarudzo 'marongero anoenderana nezvinodiwa kuitira kuti system yako iende kunorara mode pasina kusangana chero nenyaya dzataurwa pamusoro apa.
mutyairi irql kwete zvishoma kana zvakaenzana gadziriso
Maitiro 1: Gadzirisa Computer Kurara nyaya uchishandisa Simba Sarudzo
Maitiro 2: Gadzirisa Makomputa Ekurara nenyaya neSensitive Mouse
Maitiro 3: Gadzirisa Computer Haizoendi Kunorara neNetwork Adapter
1. Enda kune iyo Kutanga bhatani izvozvi tinya pane iyo Zvirongwa bhatani ( Giya icon ).
2. Dzvanya pa System icon wobva wasarudza Simba & kurara , kana iwe unogona kuitsvaga zvakananga kubva paKutsvaga Kwezvirongwa
discord kurodha pasi kugadzirisa 1 kwe1 yakanamatira
3. Ita shuwa kuti yako system's Kurara marongero akaiswa maererano.
4. Dzvanya pa Kuwedzera magetsi marongero batanidzo kubva kurudyi hwindo pane.
5. Wobva wadzvanya Chinja Zvirongwa Zvirongwa sarudzo padyo nesarudzo yako yemagetsi yazvino.
6. Tevere, tinya pa Chinja epamberi masimba emagetsi link kubva pasi.
7. Kubva ku Simba Sarudzo hwindo, wedzera zvese marongero kuti uve nechokwadi chekuti system yako yakagadzirirwa zvakanaka kubvumira iyo system kuti iende kunorara modhi.
8. Kana iwe usingazive kana usingade kuumba nyonganiso nekushandura marongero ari pamusoro, tinya pa Dzosera zvirongwa zvisipo bhatani iro rinozopedzisira raunza ako ese marongero kune default imwe.
Dzorera PC yako kuti uchengetedze shanduko uye uone kana uchikwanisa Gadzirisa Computer Haizoendi Kunzira Yokurara MuWindows 10 , kana zvisiri saka enderera kunzira inotevera.
1. Dzvanya pane iyo Kutanga bhatani, uye tsvaga mudziyo .
2. Sarudza Maneja weMidziyo & tinya pairi kuti uvhure zvinoshandiswa.
3. Zvino, wedzera chimiro chechimiro che Makonzo nezvimwe zvinongedzo sarudzo.
4. Tinya-kurudyi pane mbeva yauri kushandisa uye sarudza Zvivakwa kubva mumenu yemamiriro.
windows 10 yekumira kodhi irql kwete zvishoma kana kuenzana
5. Chinja kune Power Management Tab.
6. Ipapo Uncheck Rega mudziyo uyu umutse komputa bhokisi uye tinya OK kuti uchengetedze shanduko.
Matanho ekugadzirisa uchishandisa Network adapta akafanana neMethod 2, uye iwe chete unofanirwa kuitarisa pasi peNetwork adapters sarudzo.
1. Dhinda Windows Key + R wobva wonyora devmgmt.msc ndokurova Enter kuti uvhure Maneja weMidziyo.
2. Zvino tsvaga iyo Network adapters sarudzo uye tinya pairi kuti uwedzere.
3. Tora kutarisa nekukurumidza pasi peimwe neimwe yesarudzo-dzesarudzo. Kune izvi, iwe unofanirwa tora-kurudyi pane chishandiso chimwe nechimwe uye sarudza Zvivakwa .
4. Zvino uncheck Rega ichi chishandiso kumutsa komputa r wobva wadzvanya OK kuti uchengetedze shanduko kune yega yega network network adapteri inoratidza pasi pechinyorwa.
Kana kuchine dambudziko kugara mukati mako Windows 10 system maererano nemamiriro ekurara, ipapo panogona kunge paine chero script kana chirongwa chinogara chichiita pane yako system izvo zvinoita kuti system yako irambe yakasvinura, kana panogona kuve nehutachiona husiri kurega yako system kuti iende ku sleep mode uye uchishandisa yako CPU mashandisiro. Kugadzirisa iyi nyaya mhanya yakazara system hutachiona tarisa uyezve unomhanya Malwarebytes Anti-Malware .
maitiro ekuona zvigunwe mumawindo 10
Gadzira Yakundikana Kuverengera Zvinhu MuContainer Error
Isa Remote Server Dhairekitori Zvishandiso (RSAT) pane Windows 10
8 Akanakisa WhatsApp Web Matipi & Matipi?
Maitiro Ekutenderedza Yako Computer Screen
Ndinovimba ichi chinyorwa chakabatsira uye iwe une nyore Gadzirisa Computer Haizoendi Kunzira Yokurara MuWindows 10 kuburitsa, asi kana iwe uchiri uine chero mibvunzo maererano negwara rino saka inzwa wakasununguka kuvabvunza muchikamu chemashoko.
windows gadziridza nhema skrini ine cursor
haina kukwanisa kupedzisa kugadzirisa kugadzirisa mawindo 10
iTunes windows 10 haina kuziva iphone
windows 10 gadzira yakanamatira pa 99
windows 10 yekuvandudza inoramba ichiisa iwo mamwe maratidziro kakawanda
dell bios kiyi windows 10